C/rashiid Janan oo si kulul u beeniyay warar laga shaaciyay.
on November 04 2013 Iyadoo dhawaantaan qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliyeed ay shaaciyeen in gudoomiyaha degmada Doolow ee dowladda Soomaaliya C/rashiid Xasan C/nuur (Janan) ay xireen ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee gobalka Gedo ayaa arinkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha.
C/rashiid Xasan C/nuur (Janan) gudoomiyaha degmada Dooloow oo ka hadlay arinkaasi ayaa marka hore beeniyay inay xireen ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Gedo, wuxuuna sheegay in wararka sheegaya inay ciidamadaas ay xireen ay yihiin kuwo been abuur ah islamarkaasina ku tilmaamay mid xaqiiqda ka fog.
Wuxuu sheegay inuu cabaareynaayo warkaasi ku aadan xarigiisa, oo mudooyinkii dambe warbaahintu ay aad u hadal heysay, sidoo kale wuxuu ka hadlay xiisada weli ka jirta degmada B/xaawo ee gobalka Gedo, waxaana uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in wax waliba xalka laga abaaro.
Dhinaca kale waxa uu baaq u diray dhinacyada isku haaya degmada B/xaawo ee gobalka Gedo, wuxuuna ka dalbaday inay ka heshiiyaan khilaafaadka iminka ka dhex jira, si shacabku ay nabad ugu wada noolaadaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayaa waxaa soo ifbaxaayay warar la isla dhexmaraayay oo sheegayay in la xiray gudoomiyaha degmada Dooloow ee dowladda Soomaaliya C/rashiid Xasan C/nuur (Janan), inkastoo iminka uu gudoomiyaha warkaas beeniyay.